SIDA LOO SAMEEYO DHULKA DIIRRAN OO LEH GACMAHOODA. TILMAAMAHA TALLAABO TALLAABADA AH EE LAGU RAKIBAYO KORONTADA, KORONTADA, FILIMKA IYO BIYAHA KULULEEYAHA LAGA BILAABO KULEYLIYAHA GAASKA - SAMEE NAFTAADA
Meelaha diiran ee kuleylka ah maanta ma aha mid raaxo leh, laakiin waa muhiim: xalkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad xakamayso jawiga kuleylka ee guriga iyo si aad ah u keydiso koronto xilliga kuleylka. Faa'iidooyinka, iyo sidoo kale noocyada iyo xeerarka lagu rakibayo kuleylka dhulka hoostiisa ayaa si faahfaahsan uga hadli doona.
Faa'iidooyinka dabaqa diiran
Nidaamka diirka dabiiciga ah ma aha mid cusub: 5 kun oo sanno ka hor, habka qaboobaha diiran waxaa loo isticmaalay bakhaarada Turkiga iyo Masar. Faa'iidada noocan oo kale ah ee tilmaamuhu waxay muujinaysaa jiritaanka faa'iidooyin cad oo u qalma. Waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
kalsooni - Dabaqa diirrani ma awoodo inuu ku guuldareysto. Marka aad rakibtid nidaam noocaas ah, ma sii wadi doontaa inaad ka walwasho biyaha tuubooyinka iyo baahida loo qabo inay beddelaan, sida kiiska kuleylka dhexe;
Diyaargarow wanaagsan oo kulul - Dabaqa kulul waxaa loo isticmaali karaa ilaha dheeraadka ah ee kuleylka ama midka ugu weyn, gabi ahaanba ka tagaya kuleylka dhexe: Gidaarrada kuleylka ah waxay si siman u kululaan karaan hawada fogaan ilaa 2.5 m - tani waa heerka sare ee saqafyada guryaha;
dhaqaalaha - marka aad rakibayso nidaam biyo diirran, waxaad kaydineysaa ilaa 60% korantada, taas oo si gaar ah loo dareemi karo marka qolalka ballaaran iyo meelaha dhulalka lagu kululeeyo;
uma baahna qalab iyo qalab dheeraad ah - Nidaamka kuleylka dabaqa leh waxaa lagu qalabeeyaa qalab khaas ah oo si buuxda u kontaroolaya xogta iyo xogta wax soo saarka ee kormeer gaar ah;
suurtagalnimada is-xakamaynta - Waxaad mar walba dejin kartaa heer-kulka aad u baahan tahay, dami nidaamka haddii ay dhacdo in la baxo, ama hayso heerarka ugu hooseeya;
casriga iyo isafgaradka - Nidaamkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka tanaasushid ilaha dhaqanka ee kuleylka ah, si aad u ballaadhisid booska una bixiso iftiinka gudaha iyo ujeedka;
helitaanka - mid ka mid ah fursadaha jira ee dabaqa diiran, waxaad dooran kartaa mid ku habboon jeebka oo dhan wuxuuna ku qancin doonaa macaamilka ugu casrisan.
Intaa waxaa dheer, faa'iido kale oo ka mid ah habka kuleylka noocan oo kale ah ayaa ah in dabaqa kuleylku uu ku shaqeeyo shucaaca infrared - taasi waxay u saamaxeysaa in aan si fudud oo diirimaad ah diirimaad u ah, laakiin sidoo kale ka hortagidda soo bixidda qashinka si fiican loo qoondeeyay ee ku tiirsan kuleyliyaha. Natiijo ahaan - boodh iyo wasakh ku yaal dabaqyada ayaa ka muuqan doona wax yar.
Noocyada kuleylka dabaqa ah
Maanta, waxaa jira 4 nooc oo waaweyn oo dabaqyo diirran leh, oo kala soocaya ilaha korontada. Mid kasta oo ka mid ah ayaa leh faa'iidooyin iyo faa'iido daro.
Habkani waxaa badanaa loo isticmaalaa dhismayaal cusub ama cariishado iyo guryaha gaarka loo leeyahay. Nidaamka kuleylka dabka ee biyaha kuma xirnaayo kor u qaadista kuleyliyaha - tanina waa la mamnuucay, taniyo biyaha, iyagoo maraya tuubooyinka sagxadda dhulka, waxay ku soo laabanayaan kororka horay ugu jirey qaab aad u qabow, iyo, markaa, deriskaagu ma yeelan doonaan kulul, laakiin biyo yar yar. Ku rakibida nidaam faleedka biyaha ayaa la qabtaa iyadoo la adeegsanayo kor u qaadida kuleyliyaha kuleyliyaha ah, kaas oo lagu rakibi karo oo kaliya dhismo cusub ama guri gaar ah. Mashruuca kuleylka biyaha.
Video: marka ay tahay inay noqoto, iyo marka aysan jirin wax lagu rakibo dabaqa kulul Inkastoo xaddidaadan, habkani waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan oo hufan: marka hore, si weyn ayuu u badbaadiyaa korantada, iyo labaadna, waa wax aan khasaare lahayn - ma soo saaro raajooyinka casriga ah iyo shucaaca magnetic. Sidoo kale, rakibidda nidaamka noocan ah uma baahna kharashka dhaqaale ee dheeraadka ah, marka laga reebo xitaa haddii uu dhaco koronto la'aan, lagama tagi doonin kuleyl la'aan.
Ma taqaanaa? Walxaha kulaylka, oo loo isticmaalo in lagu dhalo guryaha casriga ah, waxay noqon karaan qaabab kala duwan oo kala duwan. Sidaa darteed, ee kiciyeyaasha suuqa Korean ee qaab ee doofaarrada iyo xitaa tyrannosaurs ayaa la soo bandhigay.
Nidaamkani wuxuu ku habboon yahay dhammaan daboolka dhulka: waa wax aan waxyeello lahayn oo aan sun ahayn. Labada dhibaato ee ugu muhiimsan ee nidaamka biyaha ayaa ah suurtogalnimada in laga daayo tuubooyinka iyo ilaalinta buuxda ee xakamaynta heerkulka (waxay ku xirnaan doontaa heerkulka biyaha hore).
Marka la barbardhigo habka biyaha, nidaamka korontada ayaa leh fursad ballaaran oo loo isticmaalo: waxay ku haboon tahay dhismayaasha iyo xafiisyada guryaha iyo goobaha farsamooyinka iyo warshadaha. Faa'iidada cad waa awoodda si buuxda u fulineysa heerkulbeegga, si loo dejiyo heerkulka muddo cayiman. Haddii ay dhacdo burbur, waxay qaadan doontaa waqti aad u yar oo lagu ogaanayo sababta keentay, mana jirto khatar ah in daadad la saaro dhulka (sida ka duwan nidaamka biyaha). Sidoo kale, marka lagu rakibo nidaamkan, ma qaadanayso waqti badan iyo qalab weyn - nidaamka korontada ayaa lagu rakibay, sida caadiga ah, 2-3 saacadood. Waxyaalaha taban ee dabaqa korontada waa:
karti la'aan, qiimaha sarreeya ee isticmaalka;
khatarta korodhka ah ee korontada korontada sababtoo ah qalab rakib ama qalab;
kharashyada dheeraadka ah ee RCD iyo dhulka;
joogitaanka aaladda elektromagnetic oo si xun u saameeya dadka meteo-ku-tiirsan;
Dhismaha dabka dhoobada: dildilaaca dabiiciga ah iyo dildilaaca oo hoos yimaada saameynta birta kuleyliyaha;
yar yar ee sarreeya ee saqafka (mararka qaarkood marka la saarayo walxaha kuleylka ee dabaqa u kaca 10 cm);
baahida loo qabo awoodda tayada leh ee awoodda badan leh, gaar ahaan markay kululeeyso goobaha waaweyn;
Ku tiirsanaanta korantada - haddii ay dhacdo caddayn la'aan waxaa lagaa tagi doonaa kuleyl la'aan.
Inkasta oo liiska noocaan oo kale ah ee cillad la'aanta ah, kuleylka korontada ku shaqeeya ayaa kor loo qaadayo xafiisyada iyo hantida aan degaanka ahayn - habkan waxaa loo tixgeliyaa habab casri ah oo casri ah marka la barbardhigo nidaamka biyaha.
Fiidiyoow: kaas oo kuleylka korontada ku fiican yahay
Waa muhiim! Qayb weyn oo ka mid ah cilladaha diiran ee dabaqyada diirran ayaa sabab u ah qalabkooda iyo hawlgaladooda aan habooneyn. Si looga hortago tan, isticmaal adeegyada kaliya ee xirfadleyda ah oo si taxadar leh u raac tilmaamaha habka loo isticmaalo iyo daryeelka dabaqa diiran.
Nidaamka filimku wuxuu ka shaqeeyaa mabda'a shucaaca infrared: marka korontadu ay dhaafto mashiinka kuleylka, mawjado elektromagnetic ah ayaa la sameeyay, kaas oo kor u qaada heerkulka wax kasta oo ku wareegsan. Mabda'a qorraxda - waxay diirimaan hawada, laakiin walxaha, taas oo markaa kuleylka u siin hawada. Sidaas daraadeed, qaybta filimku waxay siisaa kulaylka dhulka iyo daboolka daboolka, iyo iyada oo dhammaan hawada qolka ku jirta waa hore u kululaatay.
U diyaari daaqadaha daaqadaha jiilaalka.
Faa'iidada ugu weyn ee nidaamka noocan oo kale ah waa kululeyn degdeg ah oo midaysan oo aan ahayn kaliya dabaqa, laakiin sidoo kale qolka oo idil - in mudo gaaban oo shucaac ah oo kuleyl ah ay kuleylka xitaa meel aad u ballaadhan. Intaa waxaa dheer, faa'iidooyinka habkan waa rakibaad deg-deg ah, ilaalinta dhererka dhulka, uma baahna wax-qabadka hore, dhaqaalaha korontada, hawada oo foorjir ah, saameyn balaarin ah iyo maqnaan la'aanta hawo qallalan (oo ka duwan nidaamka korantada, oo awood u leh inuu kiciyo hawada). Faa'iido la'aanta ayaa ah baahida loo qabo dabaqa hoose ee dabaqa ah (mararka qaarkood kontoroolka waxaa lagu dhejiyaa filim si loo gaaro cilad fiican), shucaaca infrared, taasoo saameyn ku yeelan karta dadka xasaasiga ah. Sidoo kale, dhulka korontada waxaa loo isticmaalaa oo kaliya goobaha furan oo aan lagu daboolin alaabta guriga: marka dabaqa diirran uu taabto qalabka guriga, kuleylka dheeraadka ah iyo naafanida alaabta guriga iyo qalabka kale (gaar ahaan korontada). Natiijo ahaan, nidaamka unugyada ayaa loo isticmaalaa si aad u yar, inkasta oo ay waxtarkeeda ay ku jirto booska hogaaminaya.
Nidaamka qaboojiyaha ku rakib guriga, kuna jiif daboolka waddanka.
Fiidiyowga: farsamooyinka casriga ah ee foornada dhulka
Nidaamkan waxaa sidoo kale loo yaqaannaa tuubooyinka tubada dhoobada - dhuuban ee khafiif ah ayaa lagu rakibay mashiinka mesh. Boorsooyinka noocan oo kale ah waxaa mar walba la dhigaa sibidhka ama caleemaha. Nidaamka noocan ah, walaxda kululeeyaha waa kiibikada kaarboonka - kaarboon, oo si toos ah u jirran heerkulbeega. Mats ayaa leh hal guri oo kuleyl ah ama labo: kuwa labajibbaaran ayaa ammaan leh, waxaana lagu talinayaa in lagu isticmaalo qolalka dadku inta badan waqtigooda ku qaataan: qolalka carruurta, qolalka jiifka iyo jikada. Faa'iidooyinka habka kuleylka noocan oo kale ah waa waxtarka, daboolista iyo kululeynta aag ballaaran, maqnaashaha shucaaca infrared. Heerka dhulka ayaa sidoo kale isbedelaya. Faa'iidooyinka ayaa ah baahida loo qabo shey gaar ah iyo suurtagalnimada in la qalajiyo alwaax dabiici ah ama alaab alwaax ah, sidaas awgeed xargaha bacriminta waxaa lagu dhejiyaa foorno, foorno ama laminate.
VIDEO: rakibidda qolofta dabacsan ee kulul
Meelaha Lagu Taabo
Marka aad rakibaysid dabaqa dabacsan, talaabo muhiim ah ayaa ah in la doorto oo keliya qaabka nidaamka laftiisa, laakiin sidoo kale habka loo xirayo tuubooyinka. Waxaa jira seddexda ugu waaweyn - abeesada, salka iyo habka isku dhafan.
Sailey (spiral) - mid ka mid ah hababka loo isticmaalo tubbada ugu badan. Marka lagu dhajiyo sidan, tuubooyinka ayaa marka hore la bilaabay wareegga wareegga qolka oo dhan, ka dibna xajmiga, isku xirida bartamaha qolka. Faa'iidada weyn ee nidaamka noocan oo kale ah waa qaybinta isku midka ah ee kuleylka dhamaantiis, taas oo ka reebaysa kulaylka iyo ceelasha kuleylka. Intaa waxaa dheer, waxaa suurtagal ah in la xakameeyo talaabada rakibida - qulqulka tuubooyinka fogaan ah 8 illaa 50 cm Maanta, habka dhejinta qotada ayaa ah midka ugu kalsoonaan karo oo waxtarka leh, marka laga reebo, waa shaqo-yarida ugu xoogan ee lagu rakibo (tuubadu ma badna, laakiin waxay sameysmaysaa isbeddel sahlan). Iyada oo rakibidda habka noocaas ah ayaa loo maamuli karaa xitaa kali. Qaababka suufka ayaa kuu ogolaanaya inaad diiriso dhismaha qaababka kala duwan iyo qiyaasta adigoon wax dhib ah haysan. Muhiim ma ahan inaad daboolka daboolka ku daboolatid, tusaale ahaan, waxaad aadi kartaa meelaha aan u baahnayn kuleylka, tusaale ahaan, meesha bannaan ee kabadhada ama fadhiga.
Snake - habka ugu yar ee loo isticmaalo tubbada. Sababtoo ah xaqiiqda ah in tuubooyinka loo abbaaray sida abeeso, tiro badan oo ah cillado iyo naafonimo ee qaabkan ayaa soo baxa. Qalabka ugu horreeya iyo kan ugu weyn waa in kulaylka qaar dhacaan, gaar ahaan biyaha kululeeyaha - tuubooyinka oo kaliya waxay ku kulul yihiin dabaqa hal dhinac, marka ay gaaraan dhamaadka wareeggooda, waxay leeyihiin waqti ay ku qaboojiyaan. Laga soo bilaabo halkan waxaad ka heli kartaa dabaqa kulul dhinac dhinac ah qolka, iyo in yar oo diirran - dhinaca kale. Sidoo kale khasaaro waa dhibaatada rakibida: Sababtoo ah xaqiiqda ah in tuubooyinka inta badan loola jeedo (xagal ay ilaa 180 °), waxay noqdaan kuwo jilicsan oo badanaaba dib loo dhigo. Habkani wuxuu si caadi ah u isticmaalaa qolalka yaryar, oo aan lagu foorarsanayn alaabta guriga (alaabta wax lagu xiro ee "dabka" waa mid aad u dhib badan oo adag), ama kululaynta meelo yar oo yar (tusaale ahaan, waddo).
Wadajir - wuxuu ka kooban yahay isku-dabiici ah labadaba dabayl iyo abeeso, ama dib-u-qaabeynta habka hal (koollo laba dabac ama shiil). Habkani waxaa loo isticmaalaa in si caqligal ah loo siiyo kuleylka qolka, tusaale ahaan, meelaha aan kuleylka u baahnayn, abeeso ayaa la dhigaa, iyo marka kulaylka loo baahdo, tuubooyinka waxaa lagu dhejiyaa kochlea. Labada dhaje ee labadaba waxaa loo isticmaalaa kulaylka iyo kuleylka si fiican.
Mararka qaar ma aha farsamooyinka styling oo keliya, laakiin sidoo kale nidaamyada naftooda - tusaale ahaan, waxay wadaagaan biyaha iyo nidaamka korontada. Tani waxay ku habboon tahay kiisaska dhibcaha korantada: Haddii aad korontada soo gasho, waxaad qolka ku diirin kartaa habka biyaha. Video: xeerarka qaabeynta
Ka hor intaadan bilaabin inaad dhigto dabaqa diiran, waxaa lagama maarmaan ah in la naqshadeeyo oo tixgeliyo dhamaan faahfaahinta nidaamkaan. Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad ogaato haddii dabaqa diiran uu noqon doono ilaha ugu muhiimsan ee kuleyliyaha ama gargaarka. Xaaladda tuugta, waxa suurtagal ah in la sameeyo qaab la'aan, laakiin haddii dabaqa kuleylku yahay aqalka weyn ee kulaylka gurigaaga, waxba ma qaban doono iyadoo aan qorsheyn taxaddar leh.
Ka dib marka la qaboojiyo kuleylka dhulka hoostiisa ayaa lagu go'aamiyey (kuleyliyaha waaweyn ama caawiye), nidaamka si fiican ugu haboon qolalkaada si toos ah ayaa loo doortaa. Waxaan horey u soo ogaanay in qolalka leh kuleylka dhexe, rakibidda nidaamka biyaha waa aan loo baahnayn, laakiin korontada ma noqon karto mid ka fiican. Meelaha waaweyn, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo nooca filimada leh shucaaca infrared, iyo jikada iyo barkadaha leh nooc calaamadeysan - nooca cable.
Waxaan isku dhejineynaa boggayaga, waxaanan dhisi doonaa maqaasiinka, Veranda iyo perlog.
Ka dib hawlaha la qeexay iyo nooca dabka ee kuleylka dabiiciga ah ayaa lagu doortaa, naqshadeynta mashruuca laftiisa ayaa bilaabmaysa. Waxaa lagama maarmaan ah marka la xirayo nidaamka biyaha (dhismaha cusub, adeegyada rasmiga ah waxay awoodi doonaan inay ku rakibaan nidaamkan oo keliya iyada oo ku saleysan mashruuc la ansixiyey), iyo sidoo kale heshiis la dhisayaasha ama qandaraaslayaasha. Mashruuc noocan oo kale ah ayaa loo samayn karaa si madaxbannaan ama loo dhiibo rakibayaasha.
Video: laba qaladaad ee naqshadaynta naqshadaha diiran
Mashruucu waa inuu tilmaamaa:
qorshaha aqalka / guriga, halkaasoo cabirka daaqadaha, dhererka derbiyada, aagga dhulka, iwm.
sharaxaadda qalabka derbiga dibadda, noocyada daaqadaha iyo qaybaha albaabka;
heerkulka loo baahan yahay in la dhigo qolalka;
goobta kuleyliyaha biyaha ama gudida korontada;
goobaha kor loo qaado iyo dhulka;
Mashruuca naqshadeynta guryaha oo muujinaya meesha uu ku yaal alaabta guriga.
Xisaabiyadan waa lagama maarmaan si loo ogaado heerkulka saxda ah, qaababka qashinka, xisaabinta hidda, dhumucda qulqulka iyo qodobo badan oo kale. Haddii aadan hore u laheyn waayo-aragnimo xisaabeed, waxaa fiican inaad ku qanciso naqshadeynta iyo rakibidda nidaam diirimaad diirran si xirfadleyda.
Ma taqaanaa? Nidaamka ugu horreeya ee diirada saarnaa guriga waxaa lagu soo bandhigay Roomaankii 200aad ee BC. er Waxay isticmaaleen foornada dhulka hoostiisa ah ee kuleylka dabaqa dhulka hoostiisa ah.
Si loola kululaado wakhti dheer oo aan la qabsan wakhtiga, waa lagama maarmaan in la bixiyo wax badan oo taxaddar ah oo lagu rakibo. Xitaa haddii aadan hore u dhigin nidaamyada noocyada diirran ee diirran, waxaad akhrin kartaa suugaanta ku haboon, hirgelinta nidaamkan si sax ah oo sax ah.
Waxaa jira nidaamyo heerar ah iyo shuruudaha xisaabinta ee lagu guuleystay sanadihii la soo dhaafay. Sidaa darteed, habka kuleylka dabka ee biyaha waxaa ku jira shuruudahan:
10 mitir kiiloo mitir, 16 mm waa la isticmaalaa, dhererkiisu waa 65 mitir;
bamka biyaha ayaa lagu rakibayaa socodka 2 litir oo biyo ah daqiiqadii;
masaafada u dhexeysa tuubooyinka la dhigay waa in aysan ka badnayn 15 sentimitir;
Nidaamka dhigista lagu talinayo waa dabayl.
Xisaabaadka kor ku xusan waxay u fiicanyihiin labada degaan iyo kuwa aan degaanka ahayn.
Waa muhiim! Fadlan ogow - marka aad rakibaysid dabaqa biyaha kulul, farqiga u dhaxeeya kuleylka iyo daboolka dhulka ayaa laga yaabaa inuu yahay 15-20 °.
Nidaamka korontada, curyaamiinta iyo fiilooyinka, waxaa jira sharciyo noocan oo kale ah:
Awoodda la rakibay ee kululeeyaha waa in ay ka badan tahay kulaylka 30%. Sidaa darteed, musqulaha, awoodda 150 watts halkii mitir labajibbaaran ayaa la rakibay, ilaa 140 watts gudaha jikada, illaa 130 watts oo ku yaal balakoonnada, iyo illaa 200 watts halkii mitir laba jibbaar qolalka ku yaal dhismayaasha 1aad ee dhismayaasha;
xawaaraha farqiga uumiga ah ee aagga 10 mitir oo laba jibbaaran waa 10 cm, dhererka - illaa 60 cm;
Qalabaynta lagula taliyay waa kochlea ama nidaam isku dhafan.
Ka hor intaan la rakibin, qorshe ayaa la sameeyaa, taas oo lagu tilmaamayo:
qorshaha qashinka tuubbada ee aagga la xushay. Iyo haddii rakibidda loogu talagalay isla markiiba aqalka oo dhan, markaa qorshaha waa inuu ahaado mid caadi ah, oo leh meesha tuubooyinka dusha sare ee guriga. U hubso inaad tixgeliso meesha uu ku yaal alaabta guriga;
iyada oo la tixgelinayo dhererka daaqadaha iyo albaabyada, iyo sidoo kale meesha batariyada kuleyliyaha dhexe - tubbooyinka kuleylka aan ku dhajin meel u dhow batariyada, ugu yaraan 20 cm;
meesha isgaadhsiinta korontada iyo biyaha ee dhulka hoostiisa - badanaa dhammaan fiilooyinka korontada dheeraadka ah ayaa lagu qarsoon yahay "keeg" dabaqa dabacsan, oo hagaajiya muuqaalka qolka;
Xisaabinta qallafsan - goobaha waaweyn ma ku shubaan monolithic screed, oo jejebiso;
расположение труб возле дверных проемов - это позволит не повредить их впоследствии при установке дюбелей;
по возможности избегать резких поворотов труб на схеме - помните: сильные изгибы снижают эффективность труб.
Видео: как сделать схему укладки теплого пола Haddii nidaamku si sax ah loo qaabeeyo oo xisaabiyeyaashu si sax ah loo fuliyo, saamiga muddada iyo wax soo saarka kulayliyaha dhulka hoostiisa ayaa si weyn u kordhaya.
Ma taqaanaa? Jirka bani'aadamka wuxuu dareemayaa heerkulka +42 ° C sida "kuleyl", laakiin ka sarreeya +45 ° C - waa hore "kuleyl" ama "kulul".
Ka dib marka la naqshadeeyo, xisaabinta iyo qaabaynta nidaamka qaabeynta, saldhigga rakibidda tuubooyinka waa la diyaariyaa:
dabaqa ayaa lagu qiyaasaa iyadoo la isticmaalayo boodh hore oo la taabtey - Tani waxay lagama maarmaan u tahay dabaqad heer sare ah: waa inaysan aheyn farqi u dhaxeeya dherer, dildilaacyo ama dabaqyo;
Xasillooni yaryar ayaa laga buuxin karaa ciid, dildilaasyada waaweyn waxaa lagu qiyaasaa oo keliya xargaha ciriiriga ah;
daboolka biyaha kuleylka, ka dib markii la soo dhameeystiray xaddiga bilowga hore, biyaha la nadiifiyo ayaa la isticmaalayaa - waxay ka hortagtaa in la taaban karo iyo rinjiga ka soo qulqulaya;
ka dib marka la rakibo biyaha kululaynta waxaa lagula talinayaa in ay qabtaan shaqo tijaabo ah: ku tijaabi sagxadda dammaanadda xiriirka iyo hubi haddii dillaacu dhaco. Haddii ay jiraan wax cillado ah oo ka yimaada biyaha, waxay u baahan yihiin in wax laga qabto.
rinjirta kuleylka ah waxaa la dhigaa biyaha difaaca (tani waxaa loo sameeya biyaha iyo nidaamka korontada) - waxay noqon kartaa kuleylka kuleylka kuleylka ah, xargaha xargaha ama saxan polystyrene. Shaqadiisu waa inay bixiso kuleylka iyo ka hortagaan ka daadida.
Video: diyaarinta asaasiga ah Xasuusnow - Taarbo-infrared si aan loo dhigi karin "hab qoyan", tusaale ahaan, jawiga alkaline ee sibidhka si aad u xoogan. Sidaa darteed, taarikadaan waxaa lagu xoqay oo kaliya substrate qalalan. Kadib markii saldhigga la rakibay, rakibidda golaha wasiir ururinta.
Ku rakibida golaha wasiirrada
Golaha wasaaradda, biyaha ama korontada, wuxuu ku yaalaa derbiga meel u dhow dusha sare - mar walba waa isku mid dhamaan tuubooyinka aagga. Gudaha xayndaaban, dhammaan walxaha kuleylka ayaa lagu biiriyaa qalabka kuleylka ee guriga, iyo walxaha kontaroolka heerkulka dabiiciga ah ayaa sidoo kale lagu rakibay. Xaaladaha qaarkood, golaha wasiirada ma ku dhegan yahay derbiga, laakiin waxay ku yaalaan nuuc gaar ah lugaha. Heerka miisaaniyadda caadiga waa 650 ilaa 750 mm.
Video: ururiyaha dabaqa diiran
Boorashka waxaa loo dhigay sida soo socota:
Insulintu waxay ku haboon tahay in lagu xoojiyo mesh iyadoo la isticmaalayo cabbirka unugyada.
Tuubada waxaa laga dhejiyaa golaha wasaarada, iyo kaydka ayaa loo hayaa si loogu xakameeyo tuubooyinka si ay u soo qaadaan. Waxaa ugu fiican in la sameeyo wareegga oo dhan laga soo bilaabo hal tuubbo, iyada oo aan xirneyn - tani waxay si weyn u yareyneysaa suurtagalnimada daadinta.
Tuubooyinka la dhigay, oo lagu ilaaliyo garoonka, ayaa lagu taagay mesh dib u xoojinta oo leh dhejisyo caag ah. Xadhigaani ma ahan kuwo aad u adag si ay uga hortagaan inay xadidan yihiin maaddada.
Ku dhajinta tooska ah ee tuubada ayaa si toos ah ula socota qaabka hore loo sameeyey. Haddii ay jirto sabab kasta oo ay ka timaaddo nidaamka, waa in la dejiyaa qorshaha naqshadda. Tuubooyinka waa inaanay gooyaan ama si dhow u xirxiraan qaybaha ama derbiga (ugu yaraan 20 sm oo gaduud ah waa in lagu hayaa) - haddii kale xaaladaha wareejinta kuleylaha waa la jabinayaa.
Haddii rakibidda tuubada ay sax tahay, waxaad sii wadi kartaa inaad ku xirto nidaamka.
Marxaladdan ayaa go'aamisa in qalabku si sax ah loo sameeyey iyo haddii ay jiraan wax dhibaatooyin ah oo laga qabtay shaqada.
Dhamaadka tuubooyinka ayaa lagu xareeyaa xarigga golaha wasiirrada. Waxaa lagu jarjarey tuubo tuubo (oo loo yaqaan "cut off").
Foorno fara badan, lowska, giraanta kala-baxa iyo ibta ayaa lagu dhejiyaa tuubooyinka tuubooyinka. Tikidhada cadaadiska ayaa kala jaray giraanta. Nudaha furka ayaa lagu adkeeyay tuubbada.
Halka dhererka tuubooyinka laga soo saaro dabaqa, geesaha biraha difaaca waxaa lagu dhejiyaa (ka ilaalinta waxyeelada farsamada).
Xaaladaha halka dabaqa diiran uu leeyahay dhowr wareegyo, nidaamku waa isku dheelitiranyahay. Qalabka ilaalinta ee furfurnaanta balansiga ayaa laga soo saaraa kulankan, iyo valfaha naftooda ayaa la xiri doonaa furaha ilaa ay joogsadaan.
Nidaamka ayaa ku xiran (hadda waxaa lagu bilaabay dabka korontada, biyo hal, biyo ayaa bamgareynaya bamka).
Ka dib markii la isku xiro nidaamka, imtixaannada iyo tijaabinta jiritaanka waxay dhacaysaa. Nidaamka isku xirka dabaqa kulul ilaa nidaamka kuleylka.
Meel dabacsan waa in lagu hubiyaa dillaac. Tani waxaa la sameeyaa biyo (nidaamka biyaha) ama hawo cadaadis leh (waxaa lagu dhejiyaa kombiyuutar). Cadaadiska loo baahan yahay ee biyaha ama hawada waxaa lagu go'aamiyaa sida waafaqsan mashruuca. Taabashada noocaas ah ee dabaqa biyaha ayaa la dhigayaa xayndaabka la taaban karo ka hor inta aanad ku shubin naqshadihii ugu dambeeyay.
Waa muhiim! Warshadaha weelasha diirimaadyadu marwalba hubiyaan nidaamka warshadda, iyagoo bixiya shahaadada damaanad qaadka. Sidaa darteed, haddii tijaabooyinka lagu arkay qaar ka mid ah dhibaatooyinka la helay, waxay u badan tahay inay tahay natiijada rakibidda ama naqshadaynta.
Laakiin haddii dabaqaas la dhigo saldhig alwaax ah ama nidaamka kuleylka dabka leh, cadaadiska cadaadiska ayaa si dhakhso ah loo sameeyaa ka hor inta aan la xoqin tuubooyinka iyagoo leh xaashiyo xayawaanka. Goobaha kuleylka ayaa si aan hore loo hubin loo sameynin - wareeg kasta wuxuu ka buuxsamaa biyaha ilaa hawada si buuxda u barokacayso. Si arrintan loo sameeyo, furo oo xir xididada hawada kuleylka ah ama mitirka socodka. Kadib sameynta baaritaanka noocan oo kale ah, tuubooyinka ayaa lagu xiray laambiyaal kama dambeys ah.
Baadhitaanka ugu dambeeya waa mid ka mid ah marxaladaha ugu dambeeya ee lagu rakibayo nidaam diiran:
Baadhitaanka (badanaa nooca 400) waa la duudduubay. Dhulka dabiiciga ah ayaa ka muuqda.
Nidaamka biyaha sagxadda ka hor inta aan la furin waa in laga buuxiyaa biyaha ama hawada - tani waa la sameeyaa si looga fogaado isbeddelka tubooyinka biyaha.
Foornada waxaa loo dhigaa qaybo gooni ah, oo lagu qiyaaso qaanuunka, xitaa wadada isbaarada ayaa la eegayaa.
Ka dib markii la riixo guulaha ay gaareen mudadii 27 maalmood gudahood. Muddadan, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in lakabkiisa sare uusan engegin (haddii kale dildilaaca ayaa soo bixi doona), ujeedadaas, boodhka la taaban karo waxaa lagu buufiyaa biyaha waxaana lagu daboolayaa filim ka dhigaya qoyaan.
Xasuuso: kuleylka kuleylka ah ee kuleylka ah wuxuu ilaaliyaa walxaha kuleylka ee kala-soocida iyo dhulka oo xitaa xaaladdiisa. Sidaa daraadeed, marxaladan dhamaystiran waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan - waa in lagu dhajiyo si sax ah oo loo qoondeeyey si waafaqsan nidaamka nidaamka la cayimay. Waxaa loo yaqaan 'screed' in kuleylka kuleylka kuleylka u gudbi doono, sidaas darteed xoogiisa iyo dhumucdiisaba waa in si taxadar leh loo hubiyo.
Ma taqaanaa? Qofku wuxuu dareemaa diiran ama qabow iyadoo la adeegsanayo heerkulbeegyada khaaska ah, oo ku yaala dhamaan dusha jirka. Waxay ka mid yihiin labo nooc - qaar ayaa u diidaya kuleylka, iyo kuwa kaleba - kaliya qabow.
Dharka ugu dambeeyay waxaa la dhigaa dusha sare: faylka waxaa lagu dhajiyaa daboolka foornada, laminate iyo kaniisada - adigoo isticmaalaya substrate gaar ah, halka linoleumka isla markiiba la dhigo dhagax la taaban karo. Fadlan ogsoonow in nidaamka biyaha diirran yahay dusha sare waa in si gaar ah loo doortaa: Haddii, tusaale ahaan, dabaqa korontada ama kan korontada lagu dhaqdo si dhakhso ah loo qaboojin karo haddii ay kulaylka ka baxaan, tuubooyinka biyaha ayaa weli kululaanaya waqti dheer, oo ka dhigi kara qoryaha dabiiciga ah iyo laminate gudaha. Sidaa darteed, laminate waxaa ugu wanaagsan loo isticmaalaa dabaqa curyaamiya, taarikada - biyo, qolka iyo qoryaha dabiiciga ah - dabaqa korontada. Xulashada iyo rakibidda dabaqa ayaa ah tallaabada ugu dambeysa ee lagu rakibayo nidaamka kuleylka dabaqa ah. Waxaan dib u eegnay sharciyada asaasiga ah ee xulashada iyo rakibidda nidaamka kuleylka dabaqa ah. Kuleylka kuleylka ee maanta waa nidaam lagama maarmaanka ah ee guri kasta oo casri ah: ma ahan oo kaliya wax ku ool, oo haboon, oo ammaan ah, laakiin dhaqaale ahaan. Dabcan, astaamaha noocaas ah waxay cadeynayaan in dabaqyada diirimaadka aysan ahayn oo keliya laakiin loo baahan yahay in la rakibo: tani waxay si weyn u yareeysaa kharashyada iyo kulaylka guriga oo dhan sanadka oo dhan.
Video: Daboolka dhulka
Dabaqa biyaha kulul, sida dabaqa korontada, looma rakibin meel u dhow derbiga ama dabka, laakiin fogaanta iyaga, sidaas darteed, waxaad u baahan tahay inaad hagaajiso qorshaha dhulka iyo meesha shay kasta. Haddii aad dooratay dabaqa biyaha kuleylka ah, waxaad si fudud ugu rakibtaa gudaha gudaha, sida waafaqsan nidaamka iyo qaabeynta. Si ka duwan dabaqa korantada, uma baahnid inaad tixgeliso meelaynta alaabta guriga ama walxaha kale.
waxaan ku dhejin karnaa qolka korontada ku shaqeeya ee balakoonka iyo qubayska, waxaan wacnaa dhamaadka usbuucyada oo bilaabaan isku day)) Waa mid aad u raqiisan, waa mid fiican, laakiin qaali ah, Ruushka, waxay yiraahdaan waa kuwo aad u jilicsan (waxay u isticmaalaan inay yihiin super). Shaki ayaa laga helay maqaal ku saabsan kuleylka kuleylaha qalabka casriga ah, ka soo baxday wax ka jaban kabadan, waxa dhici doona xiga)))
Deriska guriga 2